Green Way - သခွားသီးနဲ့ အကျိုးကျေးဇူး
ထွန်းဝင်းကျော် 25/03/2019 17:36 PM Content Provider - Greenovator
Photo - သခွားသီး၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးပုံ
တို့စားတဲ့ သခွားသီး၊ မျက်နှာပေါ်တင် ပေါင်းတင်တဲ့ သခွားသီး ဘာတွေကောင်းမလဲဆိုတော့ သေချာအောင်လေ့လာကြည့်တော့ ဘာတွေတွေ့လဲဆိုတော့ကာ…….
(၁) အာဟာရအများကြီးပါတယ်လေ………၊ ရှယ်ပဲ ကယ်လိုရီ၊ အသားဓာတ်၊ ပရိုတင်း၊ အမျှင်၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဗီတာမင် ကေ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီ့စ် တွေပါပြီးတော့ အဆီကတော့ ဇီးရိုးပါတဲ့။ ရေလည်း အများကြီးပါသေးတယ်။ သခွားသီး တစ်လုံးလုံးမှာ ၉၆ ရာခိုင်နှုန်းလုံးက ရေပါတဲ့။
(၂) ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ နာကျင်တာတွေကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
(၃) ဝိတ်ကျတယ်တဲ့ အမတို့ရေ…. ဆလင်းဘော်ဒီတွေဖြစ်ချင်ရင် စားသာစားကြနော်။ သခွားသီး (၁၀၀) ဂရမ်လုံးမှာမှ အဆီက ၁၅ ကယ်လိုရီလောက်ရှိတာ ဆိုတာကတစ်ကြောင်းဆိုတော့ ၁၁ အောင်စ စားရင်တောင် ကယ်လိုရီ (၄၅) ပဲ ပါမှာဆိုတော့ စားသာစား ဝိတ်တက်ဖို့တော့ မပူနဲ့တော့။ သုပ်စားစား ပြုတ်စားစား။
(၄) သွေးတွင်း အချိုဓာတ်ကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ဆီးချိုသမားတွေ အချိုစားပြီးရင် သခွားသီးလေးသာကိုက်လိုက် အေးဆေးပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဓာတ်စာက ပိုကောင်းပါတယ်နော်။ ဆေးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိတယ်လေ။ အစကတည်းကဆို ဆီးချိုကိုပါ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၅) ဝမ်းချုပ်နေလား..သခွားသီးကိုစားလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ရေကလည်း အများကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ အမျှင်ဓာတ်တွေလည်း ပါတာကြောင့်မို့ ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေပြီး ဝမ်းမှန်စေပါတယ်။
(၆) ရေဓာတ်နဲ့ ပြည့်ဝနေစေပါလိမ့်မယ်။ ရေတွေ အများကြီးပါဝင်တာကြောင့်မို့ ရေဓာတ်ပြည့်ဝနေမယ် ဆိုတာကတော့ ငြင်းစရာရှိမယ်မထင်ပါဘူးနော်။
(၇) အပူတွေ ကင်းစေပါတယ်။ သခွားသီးစားတော့ ကိုကိုတို့ အပူငြိမ်းတာပေါ့။ အတွင်းအပူတင်မကဘူးနော်။ အပြင်ဖက်က နေလောင်တာတို့အတွက်လည်း သုံးလို့ရတယ်တဲ့။
(၈) အဆိပ်တွေကို ကျောက်ကပ်နဲ့ပေါင်းပြီး အတူတူတိုက်ထုတ်ပေးပါတယ်တဲ့။ အေ ဘီ စီ စတဲ့ ဗီတာမင်တွေကြောင့် အားပြည့်လန်းဆန်းနေမှာပါ။ မုန်လာဥနီ၊ ဟင်းနုနွယ်တို့နဲ့ ရောစပ် ကြိတ်သောက်ရင် ပိုတောင်ကောင်းတယ်ဆိုပါတယ်။
(၉) အသားအရေလှစေတဲ့ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ စီလီကွန် စတာတွေ ပါဝင်ပါသေးတယ်။
(၁၀) ဝိတ်ကျစေပါတယ်။ သုပ်စားစား၊ တို့စားစား၊ စွပ်ပြုတ်ပဲလုပ်သောက်သောက် ဝိတ်ချချင်တဲ့သူတွေ သုံးလို့ရပါတယ်နော်။
(၁၁) မျက်စိကို ကောင်းစေတယ်။ သခွားသီးကိုပါးပါးလှီးပြီးတော့ မျက်စိမှာကပ်ပေးရင် မျက်ဝတ်အိတ်အတွက်လည်း ကောင်းစေပါတယ်။
(၁၂) သွေးပေါင်ချိန်ကိုလည်း မှန်စေပါတယ်။ အတက်အကျ ကြမ်းတဲ့သူတွေ သခွားသီးတို့စားလိုက် ပါ။ သွေးပေါင်ချိန်ကို မှန်နေအောင် ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
(၁၃) ခံတွင်းအနံကောင်းအောင်လို့ သခွားသီးကို အရည်လုပ်သောက် ပလုတ်ကျင်းလို့ရပါတယ်တဲ့။ ကစ်ပြီး အနံ့ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့လေ.. ။
(၁၄) ဆီလီကာ ပါဝင်နေတာကြောင့်မို့ ဆံပင်နဲ့ လက်သည်းတွေအတွက် ကောင်းတယ်။
(၁၅) ကြွက်သားနဲ့ အဆစ်အမြစ်တွေကို ချောမွေ့စေပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း အားပေးပါတယ်။
ငရုတ်ကောင်းပင်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မကူးစက်လာစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်
2014 အတွက်လိုက်နာရမယ့် အစားအသောက် စည်းမျဉ်းအသစ်တွေ
ပဲပြားထဲကဖော်မလင်၊ တီလားပီးယားထဲက ပဋိဇီဝဆေးမှသည် မုန့်ဟင်းခါးထဲက တံတွေးစက်များ
ကျန်းမာခြင်းဆုလာဘ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အာဟာရ ပြည့်ဝတဲ့ သီးနှံတွေ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီး မျှတစွာ စားသုံးကြပါစို့
စည်ပိုင်းပုံ အုတ်ဖုတ်မီးဖို (Kiln) ဖြင့် အုန်းခွံမီးသွေး ပြုလုပ်ခြင်း
Compost Tea (မြေဆွေး လက်ဖက်ရည်)